Naya Patrika – Media Kurakani
१० औँ वर्षमा नयाँ पत्रिकाः लोकप्रियतामा दुई नम्बर दावी
April 13th, 2016 Media Kurakani Media News No Comments
२०७३ सालको पहिलो दिन अर्थात बुधबार नयाँ पत्रिका दैनिकले आफ्नो प्रकाशनको दशौं वर्ष प्रवेश कार्यक्रम मनाएको छ। १० वर्षअघि ट्याब्लोइड पत्रकारिता सुरु गरेको यो दैनिक अहिले मुलधारको ब्रोडसिट बनिसकेको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा नयाँ पत्रिकाले २० पृष्ठको नियमित र ४८ पृष्ठको परिशिष्ठांक प्रकाशन गरेको छ। सामान्य अवस्थामा १६ पृष्ठमा प्रकाशन हुने…
राजीनामा पत्रमा Zee News पत्रकारले सोधेः यो कस्तो पत्रकारिता?
February 22nd, 2016 Media Kurakani World No Comments
हामी पत्रकार प्रायजसो अरुमाथि प्रश्न उठाउँछौँ तर आफूमाथि कहिल्यै उठाउँदैनौँ। हामी अरुको जिम्मेवारी निर्धारण गर्छौँ तर आफ्नो गर्दैनौँ। हामीलाई लोकतन्त्रको चौँथो खम्बा पनि भनिन्छ तर के हामी, हाम्रा संस्थाहरु, हाम्रो सोच, हाम्रो कार्यप्रणाली लोकतान्त्रिक छ त? यो प्रश्न मेरो मात्र होइन। हामी सबैको हो। जेएनयुएसयु अध्यक्ष कन्हैया कुमारलाई ‘राष्ट्रवाद’ को…
नयाँ पत्रिकामा ‘मिस्टर सोलमारी’ को कथा
May 30th, 2015 Rabi Raj Baral Media Watch No Comments
यो कथा शुक्रबार (२०७२ जेठ १५) को नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ। कथामा कथावाचक बाहेक तीन जना मुख्य पात्र छन्। सुरुमा आउँछन् श्री सुब्बा। अर्थात नाम श्री र थर सुब्बा। यी पात्रले ‘भूकम्पसम्बन्धी पूर्वसूचना दिने यन्त्र आविष्कार गरेको’ भन्दै नयाँ पत्रिकामा फोन गरेछन्। ‘आउनुस्, म डेमोसहित तपाईंलाई यन्त्रबारे बताउनेछु।’ पत्रकारलाई…
September 30th, 2012 Media Kurakani Archives Comments Closed
गएको भदौ १९ गते नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित लेखमा एबीसी टेलिभिजनका कार्यकारी निर्देशक तथा समाचार प्रमुख शुभशंकर कँडेलले आफ्ना अभिभावकको सहयोगका कारण एबीसी टेलिभिजन आफ्नो स्वामित्वमा आएको उल्लेख गरेका छन्। अभिभावकको कस्तो प्रकारको सहयोग हो भन्ने प्रष्ट नखुलाएपनि बुझ्न त्यति कठिन छैन, टेलिभिजनको स्वामित्व नै आफ्नो हातमा आउने सहयोग भनेको आर्थिक…